Oge ezumike na Huanchaco, n'ụsọ oké osimiri nke Peru | Akụkọ Njem
Oge ezumike na Huanchaco, n'ụsọ mmiri nke Peru
Mariela Carril | | Nduzi, Peru
Yesterdaynyaahụ ụnyaahụ, otu enyi onye France si njem njem ọnwa atọ nke South America lọta. Ọ gara Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia na Argentina ma mgbe a jụrụ ya banyere otu n'ime ebe ọ kacha masị ya, ọ zara n'egbughị oge: Huanchaco.
huanchacho bụ ụsọ oké osimiri nke Peru ọ bụkwa ebe a maara nke ọma n'oké osimiri. Ọ bụrụ na ị na-achọ sọọfụ, izute ndị si n'akụkụ ụwa niile na ndụ osimiri, Huanchacho na-echere gị.
2 Otu esi aga Huanchaco
3 Ihe ị ga-eme na Huanchaco
4 Ọ mmụta si Huanchaco
Ọ bụ obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke dị nso na obodo Trujillo, ukwu nke ceviche na taa akụkụ nke ụzọ njem nleta nke a maara dị ka ụzọ Moche. na jọrọ njọ Ọ bụ ọdịbendị dị mkpa na Peru oge ochie na njegharị ahụ na-ewe ndị nwere mmasị site na njem nke saịtị ndị bụbu akụkụ nke alaeze Chimú na Mochica, nke dị na mgbago mgbago ugwu obodo ahụ, nke e mere atụmatụ ịbụ ihe dị ka kilomita 700 site na Lima.
A maara nke ọma n'ụsọ oké osimiri Peruvian Pacific na ụwa nke sọọfụ na Huanchacho ejirila na 2013 mee ka a mata ya na mba ụwa dịka Ebe nchekwa ụwa. Enweghị ọtụtụ osimiri na mbara ala nwere aha ahụ, naanị ise na obere osimiri Peruvian a bụbu akụkụ nke ndị ahọrọ, yabụ… ị ​​ga-atụ uche ya?
Nwere ike ịga mara Trujillo, ma ọ dịkarịa ala ebe akụkọ ihe mere eme ya, wee mee naanị kilomita 13 ruo Huanchaco. Ọnwa a bụ otu n’ime ụbọchị kachasị ekpo ọkụ n’afọ dịka mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ na-ahụ oge ọkọchị mana ka na-aga okpomọkụ anaghị adịkarị elu karịa 30 ºC. N'ezie, iru mmiri, ịdị n'akụkụ oké osimiri, na-adị elu mgbe niile.
Otu esi aga Huanchaco
Ebe mbata bụ Trujillo, obodo kacha ibu n’ogbe ahụ. Nwere ike ị nweta ebe a site na ọdụ ụgbọ elu na werezie bọs ma obu obere obere isonyere isi ihe abuo. Trujillo dị ihe dị ka kilomita 560 site na Lima n'ihi ya ị nwekwara ike iji obere ụgbọ elu gaa njem a. Nhọrọ kachasị ọnụ ala bụ ụgbọ ala mana ọ na-ewe ihe dị ka awa iri na otu.
Ndị na-agba akwụkwọ na-anaghị ebuli ụgbọ elu dị ukwuu, yabụ ụzọ ụgbọ njem kachasị dịkarị, bọs isi ebe a gaa ebe ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ nnwere onwe, njegharị ahụ bụ nke gị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị Peru bụ oke njem nleta O siri ike ịchọta njem a haziri ahazi na otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ enwere.
Enyi m nwere obi ụtọ na Huanchacho ma ọ nọrọ ebe ahụ n’agbata Nọvemba na Disemba, ọ bụ ezie na ha na-ekwu na oge kachasị mma n’ihi ihu igwe na steeti oke osimiri dị n’agbata Disemba na Machị. N'oge oyi, ikuku dị karịa ma nke ahụ na-eweta igwe ojii karịa, ọ bụ ezie na nke ahụ anaghị atụ ndị surfers ụjọ.
Ihe ị ga-eme na Huanchaco
Ọ na-ada ụdị ihe doro anya mana nke a bụ maka iji sọfụ. Ọ bụrụ na ị maara, magburu onwe ya. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịbanye n'ụlọ akwụkwọ ma nwee obi ụtọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ụbọchị ole na ole ị ga-amụ ihe mana ị ga-eme enyi na ịchị ọchị. Enwere ọtụtụ ụlọ ahịa ndị na-akụzi ma na-agbazite akụrụngwa na mbadamba.
Ma na mgbakwunye na sọọfụ, Huanchacho nwere ebe nkiri ụfọdụ a ga-agarịrị. N'oge ọchịchị ndị Spen, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri dị oke mkpa mana na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ nke Salaberry meghere ma ọ bụrụ ihe ochie. Ọ bụ na 1891 e mere ogologo ogologo mita 108 na ọ dabara nke ọma na ọ ka na-eguzo ma ọ dịghị onye chọrọ ịla n'iyi.
Na ala mmiri nwere obere square n'ụsọ osimiri, nke na-ebelata ruo mgbe ọ na-etolite ụzọ nke nta nke nta na-abanye na mmiri. Na ngwụcha nke narị mita iri abụọ, e nwere ụzọ abụọ dị n'okirikiri nke nwere ikpo okwu n'akụkụ aka nri, obere ala karịa isi ihe owuwu. Gagharị ebe a na-ele anya n'oké osimiri, ndị na-awagharị mmiri, obodo n'azụ gị na anyanwụ dị ebube.
Na ụsọ oké osimiri nke Huanchaco enwere ọtụtụ ụlọ nri na ụlọ nri ndị bụ ezigbo nna na azụ na azụ.. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ma detụ ụtọ nke ọma ceviche nke a bụ nnukwu ebe. Na Satọde na Sọnde ọ na-akawanye mma n'ihi na enwere ụlọ mmanya na ọtụtụ ndị njem nleta si mba ọzọ na-abata. Febụwarị bụ ọnwa ejị, ọzọ dị mma ma dịkwa mma ileta.
Huancacho na-mara maka "Caballitos de totora", a ọdịnala ọdịnala nke ebe a na-eji akwụkwọ na ahịhịa amị eme ihe, osisi. Ndị obodo ahụ arụọla ụgbọ mmiri a maka puku afọ abụọ ma ọ bụ atọ ma bụrụkwa nke ndị ụgbọ mmiri na-akụ azụ na Peruvian kemgbe ahụ. Ihe ntụhie ya dị mkpụmkpụ ma dịkwa warara ma nwee ike iru mita ise n’ogologo. Onye a rụrụ nke ọma nwere ike iburu kilogram 200.
E wezụga ịkụ azụ, ọrụ mbụ ya, ebe a na Huanchaco kwa A na-eji ha eme ihe ọchị n'oké osimiri, na-agba ọsọ na ebili mmiri, dị ka a ga-asị na ha ji ịnyịnya ndị a dị ahịhịa amị sọọfụ. Na-ahụ ha oge niile, kpọgidere kwụ ọtọ na ájá ma ọ bụrụ na ị jụọ na ị nwere ike ịnweta njem na otu site na mmiri nke Pacific.
I nwekwara ike ileta Oflọ nke Virgin nke Peripual Help, nke e wuru n'elu ugwu, ya na nwa agbogho nke di n'ime ya bu onyinye sitere n'aka Carlos V, emere na Seville na ihu nne Juana la Loca dika ihe nlere. Ọ bịarutere ebe a na 1537.
Ọ mmụta si Huanchaco
Peru bụ ala jupụtara akụ bara ụba yabụ ebe ọ bụla ị nọ, ị ga-enwe ihe ị ga-ahụ ma mara. A kilomita ole na ole site na Huanchaco bụ Chan Chan mkpọmkpọ ebe, dịka ọmụmaatụ, wulitere site na ọdịnala Chimu nke bụ tupu ọdịbendị Inca. E mere atụmatụ na n’oge ya kachasị mma ihe dị ka mmadụ 60 bi n’ebe a, n’ihi ya ọ bụ obodo nwere leta niile. Kemgbe 1986 ọ bụ Ihe Nketa Worldwa ma taa ha nwere ike ịgafe site na ntanetị nke ụzọ ndị na-eme ka anyị bịarukwuo akụkụ nke obodo iteghete mejupụtara ebe ahụ.
Chan Chan, a kwenyere, Ọ wuru ihe dịka afọ 1300 BC na mkpọmkpọ ebe ahụ na-adọrọ mmasị adobe jupụtara na ihe enyemaka na atụmatụ geometric, nnọchite nke nnụnụ na azụ. Taa, ha mejuputara otutu ulo akwukwo nke di na onu nke Moche Valley ma buru isi obodo nke alaeze Chimor tupu ndi Incas etinye ya na ala eze ha. Mmiri ebe a si na Andes wee mee njem nke mmiri na njikwa ha n'ihi ekele usoro ogbugba mmiri n'ubi na-adọrọ mmasị nke ahụ ka dịkwa taa.
Ndị Incas bu ụzọ wee Spanish, jiri mma agha nke Pizarro, mere ka ọdịbendị na obodo ahụ gaa n'akụkụ kachasị anya nke akụkọ ntolite, na-ebughị ụzọ n'agha n'ili tụbara ezigbo akụ na ọla edo. Ihe omimi nke mere ka anyị mara ya taa sitere na 60 nke narị afọ nke XNUMX. Busgbọ ala ndị si Huanchaco pụọ na-ahapụ gị ebe a na enweghị nsogbu ha niile na-apụkwa n’okporo ámá dị nso n’akụkụ osimiri.
E nwekwara ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. Ọnụ ụzọ nke isi na ebe ngosi ihe nka na-efu ihe dị ka euro 3 ma nye gị ohere ịhụ mkpọmkpọ ebe na saịtị abụọ ọzọ. Enwekwara ntuziaka, mana ị ga-agwa ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ha. A pụrụ ịhụ mkpọmkpọ ebe a site na Huanchaco na nke Trujillo. Mkpọmkpọ ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị bụ ndị nke Huacas del Sol y Luna, ọtụtụ narị afọ okenye karịa mkpọmkpọ ebe nke Chan Chan. Ha bụ mkpọmkpọ ebe Moche na ọ kachasị mma ịnwe enyemaka nke onye ndu iji ghọta ihe niile ma hapụ ihe ọ bụla na pipeline.
Mosaics bu ihe mara mma, bụrụ nke e chebere n'ụzọ dị ebube n'ihi na ha nọrọ n'okpuru ụwa na aja ruo ọtụtụ narị afọ. Lee agba dị! Bus jiri bọs / bọs si Huanchacho ruo Trujillo. N’ebe a ị ga-apụ na Plaza de Almas wee jee ije n’okporo ụzọ Huayna Cuapac ihe dị ka nkeji iri gaa Avenida Los Incas. Ọtụtụ ụgbọ ala na-agafe n'okporo ụzọ a na ndị na-aga Las Huacas del Sol y Luna na-agafe. Njem a were ihe dị ka nkeji iri abụọ wee hapụ gị n’ọnụ ụzọ. Ọnụ ụzọ dị gburugburu 20 euro kwa onye ma gụnye ntuziaka n'ihi na enwere ike kpuchie ya na onye ndu. Enwere ụlọ ihe ngosi nka nke a na-akwụ ụgwọ iche.
Trujillo ya onwe ya, dịka m kwuru n'elu, bụ njem ọzọ sitere na spa anyị na-ekwu maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Oge ezumike na Huanchaco, n'ụsọ mmiri nke Peru